#Murtii. fi qoqqobbii qeerron Oromoo dhaabbilee siyaasaa irratti dabarsite - Kichuu
HomeNewsAfrica#Murtii. fi qoqqobbii qeerron Oromoo dhaabbilee siyaasaa irratti dabarsite
Via Adem Misoma, March 14, 2019
Qeerron Oromoo rasaasa diinaa dura dhaabbachuun jijjiirama amma OPDOn habashaaf kennuuf qophaa’aa jirtu kana fidde. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo yeroo ofii tokko tahanii uummata Oromoo ijaaruu qabanitti gandaa fi kutaan uummata Oromoo diigudhaaf socho’aa jiru.
Murtii fi qoqqobbii qeerron dhaabota siyaasaa irra keesse;
Paartin siyaasaa kamuu osoo hin tokkoomin walgahiif, miseensa horachuuf, mariidhaf waamicha godhu qeerroo biratti fudhatama hin1q qabu.
Dhaabni siyaasaa Oromoo kamuu osoo hin tokkoomin kophaatti waajjira banatu qeerroo Oromoon beekkamtii fi fudhatama hin qabaatu.
Paartiilen siyaasaa hanga tokko tahanitti paartin Oromoo kamiiyyuu kophaa kophaa socho’uun miseensa horachuu, galmeessuu fi mariisisuu irraa akka of qusatu ni hubachiisna.
Dhaabbileen siyaasaa ABO kan yeroo ammaa maqaa ABOn socho’an ABOT,ABOQC,ABOSG dhaaba jaallatamaa #Jal_Nadhii_Gammadaa fi gootonni Oromoo jalatti wareegaman tokko jalatti deebi’anii tokko hanga hin taanetti kopha kophaatti ABO ganamaa bakka hin bu’an.
Paartin hundi murtii qeerroo wareega kaffalee qabsoo Oromoo asiin gahee ni fudhatu jennee amanna. Kan murtii qeerroo irra darbuun tokkummaa paartiilee Oromoo jibbu diina tokkummaa Oromoo waan taheef qeerron Oromoo ni saaxilla.
Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa keessattuu ABO sababaa qabsoon Oromoo laaffatteen waldhabdanii fi wal miitan garaadhan walitti araaramtanii ABO kaleessaa #ElemooQilxuu
#WaaqooGuutuu hundeessudhaan Oromoof gumaachanitti akka deebitan isin hubachiisna.
Uummanni Oromoo gandummaa fi gosummaan diigamuurra dhaabni gandummaa fi gosummaan socho’u diigamuutu barbaachisa.
Gareen ABO addaan diddiigudhaan gandummaan ijaarraman ABOSG ABO ganamaa bakka hin buutu. ABOT ABO ganamaa bakka hin buutu. ABOQC ABO ganamaa bakka hin buutu. Hanga tokko tahanitti ABO bakka hin bu’an. ABOn Oromoo tokko qofa.
Uummanni Oromoo ABO jaallata malee hooggansa ABO addaan wal qoodee gandaa fi kutaan Oromoo qooduf beekkamtii hon kennu.
Dhaabonni ABO diiganii addaan qoqqoodaman ABO gandummaa qabatanii socho’an fedhii uummata Oromoo dhagahuun tokko tahuu yoo kan didan tahe qeerron Oromoo dhaabota kanniin beekkamtii dhabsiisudhaan hayyoota, qabsaa’otaa, qeerroo fi qarree Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa ijaarudhaan ABO ganamaa kan gootonni Oromoo kumaatamoonni jalatti wareegamanii fi qabsaa’onni Oromoo #Jaal_Nadhii_Gammadaa fa’a jalatti achi buutee dhabamsiifaman kan deebisnu tahuu hubachiisna.
Paartin siyaasaa murtii qeerroo kana hin fudhannee fi paartiilee Oromoo wajjiin tokkoomuu hin feene paartii Oromoo qabsoo Oromoo wareega guddaan asiin geenye Oromoo addaan qoodee naafxanyaa jalatti kuffisuu barbaadudha.. Kaayyon uummata Oromoo bilisummaa hanga tahetti paartin kaayyoo Oromoof socho’u hundi murtii kana fudhachuun tokko tahuu qaba.
#HRUBACHIISA Dhaabonni Oromoo hatattamaan walitti dhufuun kan hin tokkoomne taanan qeerron Oromoo qabsoo saba Oromoo baraarudhaaf murtee dhumaa kan murteessinu taha.
ABOn KEENYA TOKKICHA.
MAQAA ABOn GANDAA FI KUTAAN SABA OROMOO QOODUN HIN DANDA’AMU.